Ikhaya elihle elingokomlando - isitezi sesibili - I-Airbnb
Ikhaya elihle elingokomlando - isitezi sesibili
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Delores (Polly)
U-Delores (Polly) Ungumbungazi ovelele
Leli khaya elihle lomlando waseGeorgia lisenkabeni yePine Mountain, ngaphakathi kwamabhulokhi ama-2 ezitolo zedolobha nokudla kanye nebhayisikili lokungcebeleka noma ukushayela eCallaway Gardens. Noma yimuphi umthandi wezakhiwo nezinto zakudala uzogcwaliseka kuleli khaya. Ikhaya linamamitha-skwele angama-3200 wendawo yokuhlala kanye negceke elihle nompheme wokuhlala ngaphandle.
Isivakashi sizohlanganyela amagumbi amabili nendlu yokugezela eyodwa esitezi sesibili.
Ikhishi liyindawo egcwele, enkulu enenani elingapheli lezitsha zokupheka. Amakamelo amabili ezivakashi asendaweni yesibili futhi adinga izitebhisi ezikhuphukayo ukuze afike. Igumbi ngalinye liyi-14x14 elinophahla lwamafidi angu-8.
Kunegumbi lokugezela elilodwa esitezi sesibili. Isivakashi esisitezi sesibili sihlanganyela negumbi lokugezela.
Njengoba ifakwe endaweni yedolobha, ikhaya liyingxenye yeqoqo lezinye izethulo zezakhiwo zangaphambili. Idolobhana, nomakhelwane, banobungani ngendlela emangalisayo futhi baphephile.
Ibungazwe ngu-Delores (Polly)
U-Polly no-John bayatholakala ukuze uthole amathiphu mayelana nedolobha, izindawo ongase uzivakashele, nezinye izeluleko eziwusizo zedolobha kanye nenani elingenamkhawulo lezindaba ezimayelana nabantu abaphakathi kwalo.
UDelores (Polly) Ungumbungazi ovelele